सर्वसाधारणको लागि वाईवाई चाउचाउको १६ अर्वको आईपीओ आउदै,कहिले आउदै छ ? - dautarimedia.com
सर्वसाधारणको लागि वाईवाई चाउचाउको १६ अर्वको आईपीओ आउदै,कहिले आउदै छ ?
उद्योगपति बिनोद चौधरी वाईवाई चाउचाउको कारण अर्बपतिको सूचीमा पर्न सफल भएका हुन् । चौधरीलाई अर्बपति क्लबमा पु¥याउन वाईवाई चाउचाउको योगदान छ ।
चौधरी ग्रुप अन्तर्गतका उद्योगले उत्पादन गर्ने वाईवाई चाउचाउ नेपालमा मात्र नभएर भारत लगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंकमा, अफ्रिका, इजिप्ट लगायतका मुलुकमा पुगेको छ ।
सन् २०२० मा २० अर्ब भारु ( ३६ अर्ब ) बराबरको वाईवाई चाउचाउ बिक्री भएको चौधरील बताएका छन् । उनका अनुसार भारतमा मात्र ३ अर्ब प्याकेट वाईवाई चाउचाउ बिक्री भएको छ ।
Previous: पुल्चोकमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर पछाडि बस्नेको मृत्यु, चालक घाईते
Next: प्रधानमन्त्री ओली सिन्धुपाल्चोकको बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा